ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံ Turn -down Collar Khaki Solid Colour Girls Long Coats - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံ Turn-down Collar Khaki Solid Colour Girls Long Coats
$52.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $78.99
Kid Size ကို54 7T69 8 11 10 13 12 14 3T
ရုပ်ပုံ /5အဖြစ် ရုပ်ပုံ /4အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 7T အဖြစ် ရုပ်ပုံ /6အဖြစ် ရုပ်ပုံ /9အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 8 အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 11 အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 10 အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 13 အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 12 အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 14 အဖြစ် ရုပ်ပုံ / 3T အဖြစ်
ရိုးရိုးစတိုင် Turn -down Collar Khaki Solid Colour Girls Long Coats - ပုံ (၅) backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: ဝါ, polyester
ရာသီ - နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီ
အသက်အပိုင်းအခြား: 4-6y, 7-12y, 12+y
အဝတ်အစားအလျား: Long က
အထူ - ဟဲဗီးဝိတ်
Size Length Chest Suggest Length ပါ
၃-၄ ၆၆ စင်တီမီတာ ၈၀ စင်တီမီတာ ၁၀၀-၁၀၉ စင်တီမီတာ
၅-၆၉ စင်တီမီတာ ၈၂ စင်တီမီတာ ၁၁၀-၁၁၉ စင်တီမီတာ
၉-၁၀ ၇၅ စင်တီမီတာ ၈၆ စင်တီမီတာ ၁၃၀-၁၃၅ စင်တီမီတာ
၁၁-၁၂ ၇၈ စင်တီမီတာ ၈၈ စင်တီမီတာ ၁၃၆-၁၄၅ စင်တီမီတာ
၁၃-၁၄ ၈၃ စင်တီမီတာ ၉၂ စင်တီမီတာ ၁၄၅-၁၅၂ စင်တီမီတာ
118 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ခွင့်မပြုခဲ့တာတောင်းပန်ပါတယ်)) သူတို့ကအရမ်းကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုအရမ်းစောင့်နေတယ်။ အရာအားလုံးသပ်ရပ်ချောမွေ့သည်။ woopshop ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရွယ်အစားကိုပိုမိုရွေးချယ်ခဲ့သည်၊ သမီးသည်သေးသွယ်သော်လည်းအရပ်မရှည်ပါ။ ငါတို့ကကြိုက်တယ်! ငါဝယ်ဖို့အကြံပေးတယ်။ ကြေငြာချိန်ထက်ပိုမြန်မြန်ရောက်လာတယ်
အေးမြသောဝတ်ရုံ၊ ၀ ယ်ယူမှုသည်ပျော်ရွှင်သည်
အရမ်းလှတဲ့ trench coat လေးပါ။ RB မှာတစ်လသွားခဲ့တယ်။ ၁၂၄ တွင်ကြီးထွားမှုသည် ၉ အရွယ်အစားရှိသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် 124. သိပ်သည်းထည်။
၁၆၀ подходитдля ၁၄၀
အတွင်းခံအင်္ကျီကောင်း တင်းကျပ်လှချည်လား။ ဝယ်ရန်အကြံပြုသည်